Ndị na-akwado Dortmund na-enweta mmachi afọ abụọ na Hoffenheim - teles relay
A ga-ahapụ ndị na - akwado Dortmund ka ha gaa egwuregwu n'èzí Hoffenheim maka oge abụọ na-esote. Foto site n'aka DeFodi Images site n'aka Getty Images
A machibidoro ndị nkwado Borussia Dortmund ịnọ afọ abụọ na Hoffenheim na German Football Associated (DFB) kwupụtara Friday.
Isi mmalite gwara ESPN na ndị egwuregwu bọọlụ ga-enweta mmachi abụ megide onye na-akwado Hoffenheim bụ Dietmar Hopp.
Onye isi oche DFB Sports Tribunal bụ Hans E. Lorenz kwuru na nkwupụta mbụ ahụ, mgbe iwere Dietmar Hopp mkparị ugboro ugboro, ibuli ikpe amamịghe ahụ enweghị atụ.
• Henderson n'asọmpi maka aha ọkpụkpọ PL
• Galaxy Boss: enweghị obibia Messi
• Ole na United dull Dragil: uta bọọlụ
• Barca kwuputara mkpebi ịtụnanya nke Braithwaite
• Onye isi oche PSG boro ebubo nrụrụ aka
• De Jong hapụrụ Ajax maka FC Cincinnati
“Ikpe a taa abụghị ihe dị ka omume nke afọ ole na ole gara aga ịta ndị na-akwado ndị na-akwado nkwado ha ego mmachi. Supporters machibido ndị na-akwado iwu ka bụ nhọrọ n'ọnọdụ ndị siri ike na nke pụrụ iche, ebe ntaramahụhụ agaghị ezu. "
Na mgbakwunye, BVB ga-akwụghachi ndị na-agụ Hoffenheim ụgwọ maka ego belatara n'ihi ntinye ndị na-ekiri ihe na mpaghara dịpụrụ adịpụ.
E kwụọkwa klọb a € 50000 ma klọb ahụ nwere ike iji ihe ruru € 17000 maka nchekwa na mgbochi igbochi ime ihe ike, nke DFB ga-egosipụta na Septemba 30.
Ndị na-akwado Dortmund busoro Hoffenheim na Hopp ngagharị iwe na mbụ n'ihi na ha kwenyere na ọbịbịa nke ọgbakọ ahụ n'isi nke mbụ nwere ike imebi ọdịbendị bọọlụ Bundesliga site na ịgabiga iwu 50 + 1, nke kwuru na ihe karịrị 50% nke 'klọb ga-adịrị ndị otu ya.
- ESPN + meriri ikike Bundesliga site na 2020
A turu Dortmund ego € 50 gbakwunyere ntaramahụhụ egwuregwu atọ site na Hoffenheim afọ abụọ gara aga mgbe ndị na-akwado mkparị kpara klọb Hopp ọbịa n'ụlọ ọrụ site na ikenye ọkwa ọkọlọtọ, gụnyere otu na-egosi eserese nke agadi nwoke dị afọ 000 nọ na crosshairs ya na "Hasta La Vista Hopp!" Edere n'okpuru.
Na Mee 2019, ụlọ ikpe mpaghara Sinsheim gbara ndị Dortmund ezigbo ahụhụ mgbe ndị na-ekwuchitere ndị na-ekwu okwu rere ure nwe Hoffenheim onye nwe Hopp otu afọ tupu mgbe ahụ. Dortmund akpọọla ikpe ahụ, mana anatabeghị ụbọchị mkpegharị nke ụlọ ikpe mpaghara.
Mgbe akụkụ abụọ ahụ zutere ọzọ na Hoffenheim na ngwụsị December 2019, ndị na-akwado Dortmund gosipụtara ọzọ ọkọlọtọ iwe ma kpagbuo Hopp.
Dortmund ga-aga Werder Bremen na Bundesliga na Satọde ebe Hoffenheim ga-eche otu egwuregwu pụọ na Borussia Mönchengladbach.
Nke a bu ụzọ pụta (na Bekee) http://espn.com/soccer/borussia-dortmund/story/4057342/borussia-dortmund-handed-2-year-hoffenheim-ban-for-offensive-chants
Onye isi ala Biya na-enyere ụmụ akwụkwọ Cameroonian aka na mpaghara iche iche site na FCFA50 nde